Rugby : norombahin’ny FTM Manjakaray ny amboara | NewsMada
Rugby : norombahin’ny FTM Manjakaray ny amboara
Par Taratra sur 06/11/2017
Nampiseho ny heriny sy ny fahaiza-manaony indray ny tovovavy malagasy, tamin’ny alalan’ny FTM Manjakaray, nandritra ny fiadiana ny taranja rugby lalaovina olona fito, ho an’ny sokajy vehivavy.
Noporofoin’ny FTM Manjakaray, nohatevenin’ireo mpilalao tao amin’ny Makis de Madagascar indray fa tsy marary ny rugby eto Madagasikara ary mizotra ara-dalàna, ka nandrombahan’izy ireo, ny andiany faharoa, ho an’ny rugby lalaovina olona fito, sokajy vehivavy. Fihaonana notanterahina tatsy amin’ny Nosy Maorisy, ny asabotsy lasa teo.
Nanjaka tokana ny ekipa malagasy satria tsy nisy naharesy azy ireo mihitsy ny mpifanandrina taminy, nanomboka tany amin’ny fifanintsanana ka hatramin’ny famaranana, nangalany ny medaly volamena sy ny amboara. Samy nataon’izy ireo, nahazo mavesatra daholo izay rehetra nifanehatra taminy. Porofon’izany ny nanilihan’izy ireo ny XV Dyonisien La Réunion, tamin’ny isa, 34 no ho 0. Taorian’io, mbola nomontsanin’ny FTM, tamin’ny isa 33 no ho 0 indray ny Amazone avy atsy Maorisy.
Mbola ekipa maorisianina, tamin’ny alalan’ny Barbarians indray no resin’izy ireo, teo amin’ny manasa-dalana, izay nisaraka tamin’ny isa mavesatra, 70 no ho 0. Nifanandrina tamin’ny FTM Manjakaray teo amin’ny famaranana, ny Entente de l’Ouest, avy atsy La Réunion. Nisaraka tamin’ny isa, 24 no ho 5, ny roa tonta tamin’izany. Ity ekipa ity irery no hany mba nahazo isa, teo anatrehan’ny ekipa malagasy. Marihina fa sady natanjaka teo amin’ny fanosehana sy tamin’ny hazakazaka ny tovovavy malagasy, notarihin-dry Ginah sy ry Tantely, nampian-dry Conan.
Ho tonga eto Madagasikara, rahampitso talata ny delegasiona Malagasy, avy niatrika ity, «Scott Womens International 7’s tournament».